Onychomycosis Anti & Nail Fungus လက်သည်းပြုပြင်ပြုပြင်ခြင်းအရည် - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်အကောက်ကင်း ၀ ယ်ပါ WoopShop®
Onychomycosis Anti & Nail Fungus လက်သည်းပြုပြင်ခြင်းအရည်
မှစ. သင်္ဘောများ တရုတ်နိုင်ငံ
အရောင် 01 02
တရုတ် / 01 တရုတ် / 02
Onychomycosis & လက်သည်းမှိုလက်သည်းပြုပြင်ပြုပြင်သည့်အရည် - China / 01 backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
ပိုက်ကွန် WT: 36g
အမျိုးအစား: Cuticle ရေနံ / အာဟာရ
ထိရောက်မှု n လက်သည်းအက်ခြင်းနှင့်ကြမ်းတမ်းသောလက်သည်းများ၊ လက်သည်းအရောင်တောက်ခြင်း၊ လက်သည်းမှိုမှတဆင့်တိုက်ခိုက်ခြင်း၊
လက်သည်းကိုပြုပြင်ပြုပြင်ခြင်းအရည်သွေးရည်ကြည်မှိုလက်သည်းကိုကုသခြင်း Onychomycosis Toe ကိုဖယ်ရှားပေးပါ။ အာဟာရပြည့်ဝသောလက်ခြေအရေပြားစောင့်ရှောက်မှု 12ml
ရောဂါကူးစက်ခံရသည့်လက်သည်းများသို့လက်သည်းအရည် ၃-၄ ချပ်ကိုအသုံးပြုပါ။
အသီးသီးနံနက်ယံနှင့်ည ဦး ယံ၌တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်။ ၂-၃ ရက်တိုင်းသုံးပြီးတိုင်းလက်သည်း၏မျက်နှာပြင်ကိုသုတ်လိမ်းပြီးဆက်လက်သုံးစွဲပါ။
1 * လက်သည်းပြုပြင်ခြင်းအရည်
34 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ.
အဆိုပါထုတ်ကုန်သည်ကောင်းပါတယ် ... ဒါပေမယ့်အမြဲတမ်းရောက်ရှိဖို့ယူခဲ့ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မိတ်ဆွေတစ် ဦး ၏ထောက်ခံချက်ဖြင့်သူမမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းတွင်ကောင်းမွန်သောအတွေ့အကြုံရှိပြီးဆေးဝါးမမှီမီဆေးဆိုင်ကိုပို့ပေးသည်။ အစာရှောင်ခြင်းသည်မမြန်သော်လည်း၊